Vaovao - Ny mpanentana Wireless tsara indrindra amin'ny taona 2021
Raha feno tariby ho an'ny iPhone, AirPods, ary Apple Watch ny efitranonao, dia izao no fotoana hanamafisana azy amin'ny pad fanerena tsy misy tariby. Ireo no famandrihana finday sy fitaovana maro ankafizinay mba hifanaraka amin'ny tetibola rehetra.
Raha mpankafy Apple ianao, dia azo inoana fa manana vatasarihana feno tariby fotsy sy adaptatera ianao amin'ny famandrihana ny fitaovanao isan-karazany, na birao na efitra fatoriana feno tariby mampifandray ny AirPods, Apple Watch ary iPhone. Mifanohitra amin'ny estetika marevaka sy mirindra tsara an'i Apple ity filaharana mikorontana ity. Soa ihany, miaraka amin'ny fiakaran'ny fiampangana tsy misy tariby, olana mora amboarina izany.
Nisafidy ny charger an-tariby ankafizinay indrindra izahay amin'ny vidiny isan-karazany izay mahazaka na inona na inona manomboka amin'ny iPhone-nao ka hatrany amin'ny tontolon'ny fitaovana Apple manontolo. Na inona na inona vokatra Apple anananao na ohatrinona ny vola laninao, dia azo antoka fa hahita vahaolana famandrihana eto ianao izay kanto kokoa noho ny tariby Lightning simba sy miloko volondavenona.
Ho an'ny fiakarana haingana amin'ny famandrihana, ny LANTAISI Wireless Charger Pad TS01PU dia manana maody Smart Charging izay afaka manitsy ho azy avy amin'ny 5W ka hatramin'ny 15W. Vita amin'ny plastika mahatanty afo ny akora ary miasa toy ny solaitra ny fonon'ny hoditra mandritra ny famandrihana, ary alefa miaraka amin'ny adaptatera mety hampiasaina amin'ny iPhone-nao, ka tsy mila mamatsy ny anao ianao. Raha mbola manana fiasa Qi ny vokatra ao an-tranonao, dia mizara charger tsy misy tariby desktop ianao, toy ny kaopy mafana, borosy nify elektrika, sns.
LANTAISI Magnetika 4-in-1 Wireless Charger Stand SW12
LANTAISI Magnetic 4-in-1 Wireless Charger Stand SW12 dia iray amin'ireo famandrihana tsy misy tariby mifanentana amin'ny MagSafe ankafizinay. Mihoatra lavitra noho ny famandrihana an-tariby ny iPhone 12-nao ity fijorona kanto ity: afaka mameno fitaovana efatra indray mandeha izy io, mampihena ny fikorontanan'ny tariby, ary afaka mameno ny telefaona an'ny fianakaviana iray manontolo, AirPods ary iWatch amin'ny adaptatera iray monja.
Miaraka amin'ny hafainganam-pandeha ambony indrindra amin'ny 15W, hifanaraka amin'ny hafainganana amin'ny fitaovana samihafa izy io, ary mihoatra noho izay ho azonao amin'ny famandrihana tsy misy tariby Qi mahazatra. Izy io dia miaraka amin'ny tariby Type-C 3-foot. Raha te-hahazo ny hafainganam-pandeha famandrihana MagSafe haingana indrindra, raha ny marina, te haka adaptatera 45W ianao.
Lantaisi 3-in-1 Wireless Charging Stand SW16
Ny Lantaisi Wireless Charging Stand SW16 dia safidy tsara raha tianao ny hampiasa ny iPhoneo hijerena fahitalavitra mandritra ny fiampangana azy. Ny charger tsy misy tariby 15W dia natao haingo mba hamenoana ny findainao na amin'ny endrika sary na sary. Ny LED roa dia azo jerena na inona na inona orientation ny findainao ary mampitandrina anao raha misy zavatra hafa eo amin'ny stand.Because ny Wireless charger rehetra dia manana fiarovana maro, ohatra, ny over-current fiarovana, over-voltage fiarovana, over-temperature fiarovana sy ny vahiny Ny fiasan'ny fanaraha-maso ny vatana, dia afaka misoroka ny fahasimban'ny batterie fitaovana amin'ny overcharge. Amin'izay fotoana izay ihany koa dia afaka mamatsy ny findainao, AirPods ary iWatch izy. 3-in-1 Wireless charger, mitahiry fotoana hahitana tariby data.
Mbola manana vokatra famolavolana sy fampandrosoana maro izahay hampahafantarina, raha te hahazo hevitra bebe kokoa momba ny vokatra ianao dia mifandraisa aminay.